Copyright © 2017 For Her Myanmar, All rights Reserved. ဆဲလ်ဖီ (selfie) ဆွဲပုံဆွဲနည်းများ	0
ဆဲလ်ဖီ (selfie) ဆွဲပုံဆွဲနည်းများ	2 weeks ago by Christina Rosy
ခေတ်ပဲမှီလို့လားတော့မပြောတတ်။ ဆဲလ်ဖီဆွဲနည်းတွေကလည်း အမျိုးပေါင်းများလှပါတယ်။ ရိုက်လိုက်ကြတဲ့ ဆဲလ်ဖီတွေ gallery ထဲမှာထောင်ပေါင်းများစွာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ရိုက်နည်းလေးတွေတော့ကွဲတယ်နော်။ အခုဖော်ပြမယ့် အမျိုးအစားထဲက ပျိုမေတို့ကိုယ်တိုင် ဘယ်အမျိုးအစားတွေအရိုက်များလည်းဆိုတာ မျှဝေပေးကြပါဦး။ ၁။အပျင်းပြေ ဆဲလ်ဖီ။ ပျင်းတဲ့အခါတိုင်း ဘယ်ပြန်ညာပြန် တဖျပ်ဖျပ်နဲ့ ရှူတင်ကွင်းရောက်သလို ဆွဲတတ်ကြပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ဆယ်ပုံမကပဲ။ နောက်တော့လည်း တစ်ပုံကျန်ရင်ကံကောင်း။ ဖျက်ပစ်တာကိုး..
၂။ရောက်တဲ့နေရာ ဆဲလ်ဖီ။ ဘယ်သွားသွားဘယ်လာလာ ဆဲလ်ဖီမရိုက်ပဲ အိမ်မပြန်တတ်သူအချို့ရှိကြပါတယ်။ အများစုက ဖေ့ဘွတ်တို့ အင်စတာဂွမ် တို့ပေါ်အပြေးအလွှာတင်ဖို့ နေရာပေါင်းစုံ ရှုထောင်းပေါင်းစုံနဲ့ စွန့်စားပြီးရိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ၃။ အစားတစ်လိုင်း ဆဲလ်ဖီ အစားက စားပွဲပေါ်ရောက်ပေမယ့် ပါးစပ်ထဲမရောက်ခင် ဆဲလ်ဖီလေးရိုက်လိုက်ဦးမှဆိုသူတွေရှိကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အစားအစာတောင် မော်ဒယ်ဖြစ်လို့။ ပါးစပ်ထဲ စထည့်ခါနီး တစ်ဖျက်၊ ကိုက်ခါနီး တစ်ဖျက်၊ နောက်ဆုံးတော့ စားပါပြီ။
တစ်ယောက်ယောက်က လက်ဆောင်မဝယ်ပေးလိုက်နဲ့။ ရိုက်ပြီ။ ဖျက်စ်…. ပစ္စည်းတစ်ခုခုမဝယ်လိုက်နဲ့။ ရိုက်ပြီ။ဖျက်စ်… စာမေးပွဲမှာ ဂန်ထူး..အဲ..မှားလို့ ဂုဏ်ထူးပါရင်တောင် ဆုတံဆိပ်ကလေးနဲ့ဆဲလ်ဖီ ရိုက်ကြွားတယ်ဆိုပဲ.. ၅။အငှါးဆဲလ်ဖီ
၆။ လူမမာ ဆဲလ်ဖီ လူကသာဖျားနေတာ ဆဲလ်ဖီရိုက်ဖို့တော့ အားရှိသေးတယ်ဆိုသူတွေရှိကြပါသေးတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဖေ့ဘွတ်ပေါ် check in ဝင်ပြီး ရောက်ရာဆေးရုံက drip လေးတန်းလန်းနဲ့ ပို့စ်ပေး ဆဲလ်ဖီဆွဲတတ်ကြပါတယ်။ ၇။လျှပ်တပြက်ရိုက်ချက်အတု။ Snap shot ဆိုပြီး အင်ထုတာပါ။ တစ်ကယ်က ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ်ကိုင်ပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင် အတုဖန်တီးထားတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း လှကြပါတယ်။ ၈။ငို၊ပြုံး၊ရယ် ဆဲလ်ဖီ အသည်းသာကွဲနေတာ ဆဲလ်ဖီရောဂါမပျောက်သေးရင်တော့ ရိုက်ပါပြီ။ အရှိန်ရရင် ဘရိတ်ဓားလေး လက်မှာမွှန်းလို့ ဆဲလ်ဖီလေးလည်းဆွဲလိုက်ဦးမှဆိုတဲ့ အရူးတစ်ချို့ရှိပါတယ်။ပြုံးရယ်ပြီးဆဲလ်ဖီရိုက်တဲ့သူတွေကတော့ သာမန်ပါပဲ။
၉။ လန်ကြုတ်ဆဲလ်ဖီ ကိုယ်သူငယ်ချင်းကိုဆေးထိုးဖို့ ဆဲလ်ဖီရိုက်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အနောက်ကနေ သူ မပါပါအောင်လုပ်ကြံဆဲလ်ဖီရိုက်တာပါ။ သူ့ပုံကြီးရယ်စရာကောင်းနေရင်တော့ ခြိမ်းခြောက်ပါပြီ။ “အေး၊ နင်ငါတို့နဲ့မလိုက်ရင်တော့ အဲ့ဆဲလ်ဖီကီုဖေ့ဘွတ်ပေါ်တင်ပစ်လိုက်မယ်နော်” စသဖြင့်ပေါ့။